shir looga hadlay nadiifinta Minooyinka dhammaan dhulka Soomaaliya oo lagu qabtay Dalka Switzerland – Walaal24 Newss
Ha’yadda Qaramada Midoobay u qaabilsan Miinooyinka waxaa lagu martiqaaday Wasaraada Aminga Gudaha Soomaaliya iyo hay” adda SEMA oo u qaabilsan Wasaarada arrimaha miinooyinka iyo qataraha ka dhasha, 22-kii bishii hore ayaa shir wadatashi oo ay soo qaban qaabisay Hay’adda.
Shirka oo lagu qabtay magaalada Geneva ee Dalka Switzerland ayaa wafdiga Dowladda Federaalka uga qeyb galay waxaa hoggaaminayay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Amniga Gudaha Xildhibaan Cabdinaasir Siciid Muuse, waxaa kale oo shirka ku wehlinayay Amb: Faadumo Insaaniya oo iyada kaalin muhiima ah ka qaadatay shirkaas una gudbisay Hay”daha ka shaqeeya arrimaha miina baarka ee jooga UNka iney sida dhow ula socon doonto howlaha Miina Baarka Soomaaliya.
Shirkaas oo ahaa labo waji ayaa wajiga hore waxaa ka hadlay Wasiir ku- xigeenka Amniga Gudaha, wuxuuna sheegay iney jiraan qorshaha howleed lagu xoojinayo caawinaada dadka ku waxyeeloobay Qaraxyada Miinooyinka iyo qataraha ka dhasha dadkaas oo u badan dumar iyo carruur.
Agaasimaha Hay”adda SEMA Xooshow iyo Sahro Cabdi oo ku hadleysay magaca Dhalinyarada ayaa warbixino muhiim ah ka soo jeediyay shirka qeybtiisa labaad, waxayna sheegeen muhiimada in si dhow loola socdo goobaha Qaraxyada miinooyinka lagu tuhusan yahay si aysan saameyn uga soo gaarin dadka rayidka ah.
Shirkaas kadib Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Amniga Gudaha Cabdinaasir Siciid Muuse ayaa booqday Safaaradda Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya ee magaalada Geneva dalka Switzerland, halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeysay Safiirada Amb. Faadumo insaaniya , sidoo kale Wasiir ku-xigeenka wuxuu la kulmay qaar kamida Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool Wadanka Switzerland, isagoona kula dardaarmay muhiimada midnimada iyo wadajirka ay leedahay iyo inay ka qeyb qataan dib u dhiska dalka.
War deg deg ah: Dagaal ka socda xaafada Siliga Amerikanka ahna dhulkii hore safarada Mareykanka ee magaalada Muqdisho
R/wasaare Kheyre oo u hambalyeeyay Madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland
Dowladda Soomaaliya oo deeq lacageed ugu deeqday dadka fatahaaduhu ay saameeyeen